पछिल्लो समय सामान्य मानिसहरू मात्र होइन, डाक्टर र वैज्ञानिकसमेत आफूमा सकारात्मक सोच विकास गर्न तल्लीन छन्। किनकि भित्री आत्मा स्वस्थ बनाउने र स्व-उपचार इकाईमा रूपान्तरण गर्ने शक्तिशाली उपकरण सकारात्मक सोचको विकास हो। मानव मस्तिष्कमा सकारात्मक सोचका माध्यमबाट इच्छालाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्ने शक्ति हुन्छ भन्ने कुरामा धेरैले विश्वास गर्न थालेका छन्।
सकारात्मक सोचले दिमागलाई आशावादी बनाउँछ। जीवनको उज्ज्वल पक्ष देख्दछ। एक उदाहरणलाई हेरौं। २ सय मिलिग्राम तरल पदार्थ अट्ने गिलासमा १ सय मिलिग्राम मात्र तरल पदार्थ छ भने धेरैजसो व्यक्तिहरू सो गिलास आधा खाली भएको देख्छन्/सोच्छन्। तर सकारात्मक सोच राख्नेहरू भने सोही गिलासमा सोही परिमाणको तरल पदार्थ उपलब्ध भएको अवस्थामा आधा भरिइसकेको देख्छन्/सोच्छन्। आधा खाली भयो भन्ने विषयले कालान्तरमा दुःख पैदा गर्न सक्छ तर आधा भरिएको सोच राख्नेहरू आशावादी मानिन्छन्।
सकारात्मक सोचले कसरी काम गर्दछ?
सकारात्मक मानसिकतासँग जहिले पनि अधिक आनन्द, खुसी र तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्वास्थ्य हुन्छ। यसले तनावको स्तर कम गर्न मद्दत गर्दछ। सकारात्मक परिणामको आशा गरे परिणाम पनि सकारात्मक पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भनाइ मात्र नभएर अब प्रमाणित पनि हुन थालिसकेको छ। शरीरलाई स्वस्थ राख्न महत्वपूर्ण कारक हाे दिमाग। दिमाग स्वस्थ राख्न सकारात्मक साेच चाहिन्छ। सकारात्मक सोचको शक्तिले हामीलाई दैनिक जीवनमा आइपर्ने कठिनाइ सामना गर्न मद्दत गर्दछ। वरिपरिका अवसरहरू देख्छ र अवसर लिनका लागि कदम चाल्ने साहस दिन्छ।
सकारात्मक सोच एक 'कौशल' हो, जसले खुसी सिर्जना गर्न सिक्न सकिन्छ। खुसी जीवनमा सकारात्मक परिणामहरूको कारण हो, परिणाम होईन। धनले खुसी ल्याउँदैन, तर अरूको हितका लागि कसैको सम्पत्ति प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत खुसी हुन्छ। आनन्दित व्यक्तिहरूको धार्मिक वा आध्यात्मिक विश्वास बढी हुन्छ।
कसरी विकास गर्ने सकारात्मक सोच?
मानिसहरूलाई सकारात्मक कुरा भन्न कोशिस गर्नुहोस्, गुनासो नगर्नुहोस्। दिमागलाई सकारात्मक सोचमा बदल्न केही भित्री काम आवश्यक पर्दछ, किनकि मनोवृत्ति र विचारहरू एकै रातमा परिवर्तन हुँदैनन्। तपाईं प्रेरणादायक साहित्य पढेर र ध्यानको माध्यमबाट सकारात्मक साेचकाे विकास गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाई‌ंको दिमाग सामान्यतया आशावादी हुन्छ, तपाई‌ं दैनिक तनावलाई अधिक रचनात्मक तरिकाबाट समाधान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
१. मुस्कान र हाँसो : मुस्कानले तपाईंको समग्र मूड र जीवनमा दृष्टिकोण सुधार गर्न सक्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भइसकेको विषय हो। हाँसो सबैभन्दा राम्रो औषधी हो। मन, शरीर र आत्मालाई शान्त पार्न र मुस्कानसहितको व्यवहार गर्न ध्यान अभ्यास गर्न सकिन्छ।
२. निःस्वार्थ सहयोग : आफ्नो समय, बुद्धिमता र पैसा दान गरेर अरूलाई मद्दत गर्नुहोस्। अहंकार हटाउनुहोस्। मानव अहंकार खतरनाक चीज हो किनकि यसले मानिसहरूलाई अरूको आलोचना र न्याय गर्ने बनाउँदछ। तसर्थ यसलाई हटाउन जरुरी छ।
३. कृतज्ञता : कृतज्ञ हुनु तपाईंको जीवनमा अझ बढी खुसी र सामग्री बन्ने संभावनालाई सुधार गर्दछ। आफूसँग भएको कुराको लागि धन्यवादी हुँदै, तपाईंले साँचो आनन्द प्राप्त गर्नुहुनेछ।
४. लक्ष्य निर्धारण : तपाईंका लक्ष्यहरू दैनिक सेट गर्नुहोस्। तपाइँको प्राथमिकताहरू माथिदेखि तलसम्म योजना गर्नुहोस्। लक्ष्यहरू राख्नु तपाईंलाई ड्राइभ र प्रेरणा प्रदान गर्दछ तपाईं जीवनमा आनन्दित र सफल हुन आवश्यक छ।
५. दिमागी तालिम : दिमागलाई सकारात्मक विचारहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न तालिम चाहिन्छ। सकारात्मक विचारहरूको साथ नकारात्मक बदल्नुहोस् र सकारात्मक कार्य पनि लिनुहोस्।
६.सत्संग : वातावरणले मानिसको चौतर्फी विकासमा सहयोग गर्छ भन्ने मनोविज्ञानको सिद्धान्त छ। 'सत्संगति‌ं किं न करोति पुंसाम्' (सत्संगले मानिसलाई के बनाउँदैन र?) भन्ने संस्कृतले उक्तिले पनि सत्संगको महत्व दर्शाएको छ। सकारात्मक व्यक्तिसँगको संगलतले सकारात्मक दृष्टिकोण विकास गर्न सहयोग गरेको हुन्छ।
७. स्थिरता : सबै परिस्थितिमा आफूलाई स्थिर राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। दुःख सुखलाई पनि शान्त रहन सक्ने बानीको विकासले दुःखबाट हुने हानी कम गर्न मद्दत गर्छ। कतिपय दुखहरूलाई पनि शिक्षाका रुपमा लिन सकिन्छ।
८. सकारात्मकता : धेरै विषयका सबल र कमजोरी पक्ष हुन्छन्। कमजोरीका पक्ष हुने भएकाले नै सबल पक्षको अस्तित्व रहेको हो। रात नै नहुने भए दिनको महत्व हुने थिएन। तसर्थ सकारात्मक सकारात्मक सोचलाई दैनिकी, बानी र जीवनशैली बनाउनुहोस्।
१०. संगीत : मनपर्ने संगीतले पनि दिमागमा ऊर्जा थप्न सहयोग गर्छ।
सकारात्मक सोच मानसिक दृष्टिकोण हो। यसले हामीलाई कालो बादलभित्र 'चाँदीको घेरा' खोज्न मद्दत गर्दछ। सकारात्मक मानसिकता पाउँदा हामीलाई खुशी, आनन्द, स्वास्थ्य, र अनुकूल परिणामहरूको पूर्वानुमान गर्न सहयोग पुग्दछ। वास्तविक र प्रभावकारी सकारात्मक सोचलाई सकारात्मक विचारहरू र सकारात्मक भावनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न र अनुकूल परिणामहरू ल्याउन सकारात्मक सोच र बानीले सहयोग गर्छ।